10 Saffarada Day From Florence By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Saffarada Day From Florence By tareenka
Florence waa meel la yaab leh in tiirka iyo waxaa jira in la sameeyo tons. laakiin, haddii aad raadinayso in ay u ganay ka baxsan caasimada this, waxaan ku helay kugu daboolay. Waxaa jira qaar ka mid ah meelaha la yaab leh si ay u booqasho in ay yihiin oo kaliya a tareen kortaan ka fog Florence. halkan waxaa ku qoran 10 Saffarada Day From Florence By tareenka si aad u raaxaysan!
Rail Transport waa ka ugu fiicaan deegaanka Jidka Si Travel iyo thwaxaa article ahaa iyada oo ujeedadu qoraal ah si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Save A tareenka, Ugu jaban in Tareenku Tigidhada Website In Adduunka.
1. Saffarada Day From Florence By tareenka: Pisa
Pisa waa on safarka ah ugu baaldi liiska ay sabab u tahay caan ku tiirsan Tower, Cathedral ee Santa Maria xayaawankan iyo goobaha kale cajiib ah. Laakiin magaalada laftiisa, ballaaran oo loo qaybiyey River Arno ah, qiimihiisu yahay safar maalin u gaar ah! Waxaa jira tiro aad u wanaagsan oo ah matxafyada yar si aad u hubiso soo baxay, iyo sidoo kale beero. Palazzo Blu ayaa sidoo kale heysta bandhigyo monographic farshaxan casri ah oo muhiim ah (Chagall, Miro iyo ugu dhawaan Toulouse Lautrec). Oo samayn baadhaan kabarta la soo dhaafay sameeyey by Keith Haring, loo yaqaan Tuttomondo.
la filayaa laga yaabaa inaad ku socotaan on safarkaaga. Sidaas, xusuusnow in haddii aad tahay claustrophobic ama ka baqin meelaha dhaadheer oo kedis ah Tower tiirsan sanqadhiisana laga yaabaa in aan rafcaan in aad, laakiin waxaa xaqiiqo ah oo qiimihiisu yahay wax arkaya!
Livorno in Tareenadu Pisa
Lucca in Tareenadu Pisa
Arezzo in Tareenadu Pisa
Mid ka mid ah ugu Saffarada Day caan From Florence By Tareenadu waa in Siena. Waxay caan ku tahay Palio, taas oo ah tartanka faras in waddaa iyada oo si siman caanka ah Piazza del Campo. Waxaa sidoo kale loo yaqaan for qurux badan naqshadaha Dr Makumbe iyo waxyaabo kale oo. Siena waa magaalo guun ah oo la buuxiyey UNESCO goobaha dhaxal ahaan dunida oo waa booqashadii ah oo ku kacaya!
3. Saffarada Day From Florence By tareenka: Livorno
Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu Saffarada Day kaamil From Florence By Tareen kuwa dooni labadaba xeebaha iyo magaalada. Ma aha sida taariikhiga ah ama dhaqanka oo kale magaalooyinka Tuscan. Si kastaba ha ahaatee, waa mid ka mid ah magaalooyinka xeebta loo dalxiis tago dhaqanka Italy ee. Waa meesha ugu fiican ee lagu nasto kuna sahamiso xawaarahaaga, iyadoo qof walba wax u.
Arezzo in Tareenadu Livorno
Pisa in Tareenadu Livorno
Florence si Tareenadu Livorno
Siena si Tareenadu Livorno
Dhaxeysa Florence iyo Siena, San Gimignano waa mid ka mid ah tuulooyinka picturesque ee Tuscany ugu. Waxay ku faantaa 14 munaaradaha Dr Makumbe, jidadka ka samysan in ku dhawaad ​​ku wareegaan iyo bogi Architecture-jir ah Dr Makumbe dhismayaasha. Waxaa ka Florence saacad kaliya iska.
5. Saffarada Day From Florence By tareenka: Bologna
In kasta oo ka baxsan Tuscany iyo waxoogaa ka badan si ay u gaaraan SLT (haddii aad rabto in aad tareenka gobolka oo aad u gaabis ah), tareenka si degdeg ah aad ku qaadato inuu Bologna in yar ka badan kala bar hal saac. (in la hubiyo in si tigidhada aad ka heli Save A tareenka Dabcan!) Bologna waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu underrated ee Italy iyo waa magaalo colaadeed aad u fiican on our 10 Saffarada Day From Florence By tareenka. Inkastoo ay xarunta taariikhiga ah u qurux badan, dhaqanka cuntada hodan, iyo jawi weli dabacsan noole, waxaa inta badan looma eego by dalxiisayaal ah oo ku saabsan wadada caadiga ah Venice Florence Rome.
Tani waa ceeb maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo la sameeyo Bologna ka kedis ah munaaradaha Dr Makumbe in tours cunto xiiso leh, iyo waxa ay taasi salka weyn Sahamin soo jiidashada kale gobolka. Waxaan toddobaadkii halkaas in April iyo jeclaaday isku dhafka ah ee xarrago iyo grittiness iyo, Dabcan, oo dhan baastada cusub in delicious.
6. shaqo joojin
Magaalada A yar ee gobolka Chianti ah, Greve waa jawharad qarsoon badan ee taariikhda, caadooyinka, iyo badan oo khamri ah dhaqanka. Greve waa safar maalin kaamil ka Florence si ay u sahamiyaan iyo marayso dukaamo farsamada ay, makhaayadaha iyo dukaamada. Haddii aad raadinayso maalin dabacsan, Greve waxaa laga yaabaa in aad doorato kaamil ah.
7. Saffarada Day From Florence By tareenka: Saturnia
Saturnia waa magaalo HBS ah Tuscany ee North Central Italy. iyadaa ugu fiican in aad isku dejiso iyo unwind. kaamerada The ilaha biyaha oo kulul gudaha Saturnia ayaa ah ilo biyo mareeno ah oo dooxada dhexdeeda ku yaal waxayna caan ku yihiin guryaha daaweynta, bixiya nasashada iyo wanaagga iyada oo bilowga ah ee cimrigiisa oo dhan.
Marka la aasaasay by Etruscans on top of yacday ah buuraha laga sameeyey tufa (dhagax ash Kobenhagen). Magaalada Orvieto baxdo si weyn kor qarar tuff in ay dhammaystirmaan derbiyada daafaca dhisay dhagxan isla yeedhay Tufa ah. The soo jiidashada ugu weyn ee aan u tegi kartaa maqan yihiin Duomo iyo joogitaanka le'daan ah. Magaalada Tani quaint waa kaamil for ambaday agagaarka iyo maxfalka ay naqshadaha.
Florence si Tareenadu Orvieto
Siena si Tareenadu Orvieto
Arezzo in Tareenadu Orvieto
Perugia in Tareenadu Orvieto
9. Saffarada Day From Florence By tareenka: Arezzo
Haddii aad ku sugan tahay Florence waayo, waxaad jeceshihiin Renaissance tahay, ku dhuftay ilaa Arezzo, saacad ama si ka fog on tareenka, for kala duwan ah muuqaal. Francesc Piero, kuwaas oo Wehbe oo ka mid ah Duke iyo Duchess of Urbino aad ka arki kartaa in Uffizi ah, rinji cibaadaysiga sare ee kaniisadda magaalada this of San Francesco. The wareegga fresco adag, oo wakiil ka ah Story ee Laanqeyrta u iishay, waa mid ka mid ah dadka ugu saameynta badan ee hore Quattrocento ah, taas oo artist ka shaqeeyay uu fikrado maniacal of space (oo ku salaysan aragti hal dhibic), nool yihiin tirooyinka degan madax ukunta qaabeeya.
Magaalada inteeda kale waxay sidoo kale bixisaa ku filan booqasho nus maalin ah oo adag (ama ka badan). Haddii aad ku raaxaysato badnaa, soo todobaadka ugu horreeya ee bisha, markii ku dhawaad ​​bartamaha magaalada oo dhan uu noqdo suuq toosaa oo qaraami ah.
Bologna si ay Tareenadu Arezzo
Sida aynu ka bixi kartaa off Venice on our 10 Saffarada Day From liiska Florence By tareenka? Venice waa mid ka mid ah kuwa ugu jacaylka iyo meelaha caanka ah Talyaaniga. Soo bandhigtay kumanaan ka mid ah kanaalada, daaraheeda waaweyn iyo dhismayaasha style Gothic. Venice waa hubaal mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan ee aad abid arki doonaa. In kastoo ay noqon kartaa mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan. safar maalin uu noqon karaa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican haddii aadan on a miisaaniyadda dhagan.
Ready in ay sax waxyaabo off liiska baaldi aad? Waxaan rajaynaynaa in our 10 Saffarada Day From liiska Florence By Tareenka ayaa ka caawiyay hoos aad soo koobto. Xusuusnow in Save A tareenka dalabyo tababar tigidhada la lahayn kharashka qarsoon, oo aad u qabsan kartaa daqiiqo gudahood!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Saffarada Day From Florence By tareenka” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-from-florence/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Daytrips europetravel Florence Tranride travelflorence travelitaly SafarkaTuscany